Ny fiangonana ao amin'ny Apôkalipsy 12 - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
lahatsoratra > Ny fiangonana > Ny Fiangonana ao amin'ny Apokalypsy 12
Tamin'ny fiandohan'ny 1er2. Ao amin’ny toko ao amin’ny Apokalypsy, i Jaona dia mitantara ny fahitany ny vehivavy bevohoka iray izay efa hiteraka. Hitany fa namirapiratra izy - mitafy masoandro sy ny volana eo ambanin'ny tongony. Eo amin'ny lohany dia misy fehiloha na satroboninahitra kintana roa ambin'ny folo. Iza no ifandraisan’ilay vehivavy sy ilay zaza?
Im 1. Ao amin’ny Bokin’i Mosesy no ahitantsika ny tantaran’i Josefa, patriarika ara-Baiboly, izay nanonofy izay nahitana fisehoan-javatra mitovy amin’izany nambara taminy. Nilaza tamin’ireo rahalahiny izy tatỳ aoriana fa nahita ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin’ny folo niankohoka teo anatrehany izy (1. Mosesy 37,9).
Ny sarin'ny nofin'i Josef dia mifandray mazava tsara amin'ny fianakaviany. Izy ireo dia Israely rain’i Josefa (masoandro), Rahely reniny (volana) ary ny rahalahiny iraika ambin’ny folo (kintana, jereo. 1. Mosesy 37,10). Raha izany no izy dia i Josefa no rahalahy faharoa ambin’ny folo na “kintana”. Lasa foko be mponina ny zanak’Israely roa ambin’ny folo lahy ary nitombo ho firenena lasa vahoaka nofidin’Andriamanitra.4,2).
Ny Apokalypsy 12 dia manova tanteraka ireo singa ao amin'ny nofin'i Josefa. Naveriny indray izany tamin’ny filazana ny Isiraely ara-panahy - ny fiangonana na ny fiangonan’ny vahoakan’Andriamanitra (Galatiana 6,16).
Ao amin’ny Apokalypsy, ny foko roa ambin’ny folo dia tsy manondro an’i Israely fahiny, fa maneho ny fiangonana manontolo (7,1-8e). Ilay vehivavy nitafy masoandro dia afaka maneho ny Fiangonana ho vadin’i Kristy mamirapiratra (2. Korintiana 11,2). Ny volana eo ambanin’ny tongotr’ilay vehivavy sy ny satroboninahitra eo amin’ny lohany dia afaka maneho ny fandreseny amin’ny alalan’i Kristy.
Araka io tandindona io dia misolo tena ny fiangonana madion'Andriamanitra ny "vehivavy" ao amin'ny Apokalipsy 12. Ny manam-pahaizana momba ny Baiboly atao hoe M. Eugene Boring dia nilaza hoe: "Izy no vehivavy cosmika, mitafy masoandro, miaraka amin'ny volana eo ambanin'ny tongony ary satro-boninahitra kintana roa ambin'ny folo, izay maneho ny Mesia dia miteraka ”(Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching,“ Revelation, ”p. 152).
Ao amin’ny Testamenta Vaovao ny fiangonana dia fantatra amin’ny anarana hoe Isiraely ara-panahy, Ziona ary “ny reny” (Galatiana 4,26; 6,16; Efesianina 5,23-24; 30-32; Hebreo 12,22). Ziona-Jerosalema no renin’ny vahoakan’Israely (Isaia 54,1). Ny fanoharana dia nentina tany amin’ny Testamenta Vaovao ary nampiharina tamin’ny Fiangonana (Galatiana 4,26).
Ny mpivaofy teny sasany dia mahita ao amin’ny tandindon’ilay vehivavy ao amin’ny Apokalypsy 12,1-3 dia misy dikany midadasika. Ny sary, hoy izy ireo, dia fandikana indray ny fiheverana jiosy momba ny Mesia sy ny angano fanavotan’ny mpanompo sampy momba ny zavatra niainan’i Kristy. Hoy i M. Eugene Boring: “Tsy Maria, na Israely, na Eglizy ny vehivavy, fa kely kokoa noho ireo rehetra ireo. Mampitambatra singa maromaro ireo sary nampiasain’i Jaona: ny sarin’ny angano mpanompo sampy momba ny Mpanjakavavin’ny Lanitra; avy amin’ny tantaran’i Eva, renin’ny velona rehetra, ao amin’ny bokin’i Mosesy voalohany, izay nanosihosy ny lohan’ilay menarana voalohany ny “taranaka” (1. Mosesy 3,1-6); ny Isiraely, izay nandositra ny dragona / Farao tamin'ny elatry ny voromahery tany an'efitra (2. Mosesy 19,4; Salamo 74,12-15); ary Ziona, ilay 'renin'ny' vahoakan'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana rehetra, Isiraely sy ny Fiangonana” (p. 152).
Noho izany ao an-tsaina, ny mpandika Baiboly sasany ato amin'ity fizarana ity dia mahita fitenenana amin'ny angano isan-karazany mpanompo sampy ary koa ny tantaran'ny nofin'i Josefa tao amin'ny Testamenta Taloha. Amin'ny angano grika, i Leto andriamanibavy bevohoka dia enjehin'ireo atody python. Nandositra tany amin'ny nosy iray niterahany an'i Apollo izy, izay namono ny dragona taty aoriana. Saika ny kolontsaina rehetra any Mediterane no manana andiany ny adin-angano izay nanenjihan'ilay biby ny tompon-daka.
Ny sarin'ny fanambarana an'ny vehivavy kosmika dia nanondro ireo hevi-diso rehetra ireo ho sandoka. Izany dia milaza fa tsy misy amin'ireo tantara ireo fa mahatakatra fa i Jesoa no Mpanavotra ary ny Fiangonana dia olon'Andriamanitra. I Kristy dia zanaka mamono ilay dragona fa tsy Apollo. Ny Fiangonana no renim-pianakaviana ary izay itondran'ny Mesia; I Leto tsy reny. Ny andriamanibavy Roma - ny personification ny Fanjakana Romanina - dia tena vehivavy janga ara-panahy iraisam-pirenena, i Babylona Lehibe. Ilay tena mpanjakavavin'ny lanitra dia i Ziona, izay ahitana ny fiangonana na ny vahoakan'Andriamanitra.
Araka izany, ny fanambarana ao amin'ny tantaran'ny vehivavy dia mampiseho ny finoana ara-politika sy ara-pivavahana taloha. Ny manam-pahaizana momba ny Baiboly anglisy GR Beasley-Murray dia nilaza fa ny fampiasan'i John ny angano Apollo "dia ohatra mahatalanjona amin'ny fampitana ny finoana kristiana amin'ny alàlan'ny marika eken'ny sehatra iraisam-pirenena" (The New Century Bible Commentary, "Revelation, p. 192).
Ny fanambarana koa dia mampiseho an'i Jesosy ho Mpamonjy ny Fiangonana - ilay Mesia nandrasana hatry ny ela. Miaraka amin'izany, ny boky dia manazava ny hevitry ny tandindon'ny Testamenta Taloha amin'ny fomba voafaritra. Nanazava i BR Beasley-Murray: "Tamin'ny fampiasana an'io fomba fitenenana io, dia nanamafy tao anaty iray i John fa tanteraka ny fanantenan'ny mpanompo sampy sy ny fampanantenan'ny Testamenta Taloha ao amin'ny Kristy an'ny Filazantsara. Tsy misy Mpamonjy hafa afa-tsy Jesosy ”(p. 196).
Ny Apokalypsy 12 koa dia mampiharihary ny tena mpanohitra ny Fiangonana. Izy ilay dragona mena mahatahotra manana loha fito, tandroka folo ary satroboninahitra fito eo amin’ny lohany. Asehon’ny Apokalypsy mazava tsara fa ilay dragona na ilay dragona — dia “ny menarana ela, izay atao hoe devoly na Satana, izay mamitaka izao tontolo izao” (Gen.2,9 ary 20,2).
Ny solontena [solontenan’i Satana] eto an-tany - ilay bibidia avy any an-dranomasina - koa dia manana loha fito sy tandroka folo, ary mena midorehitra.3,1 sy 17,3). Hita taratra eo amin’ireo solontenany eto an-tany ny toetran’i Satana. Ny dragona dia manondro ny ratsy. Koa satria ny angano fahiny dia nanana firesahana maro momba ny dragona, ny mpihaino an'i Jaona dia ho nahafantatra fa ilay dragona ao amin'ny Apokalypsy 13 dia fahavalon'ny lanitra.
Tsy fantatra mazava izay asehon’ireo lohan’ilay dragona fito. Na izany aza, satria nampiasa ny isa fito ho mariky ny fahafenoana i Jaona, izany angamba dia manondro ny maha-olon-drehetra ny fahefan’i Satana, ary ny faharatsiana rehetra dia ao anatiny tanteraka. Ny dragona koa dia manana tiara fito, na satroboninahitra mpanjaka, eo amin’ny lohany. Izy ireo dia afaka maneho ny fiampangan’i Satana tsy ara-drariny an’i Kristy. Amin’ny maha-Tompon’ny Tompo an’i Jesosy dia manana ny satroboninahitra rehetra. Izy no hosatrohina amin’ny satroboninahitra maro9,12.16).
Ianarantsika fa ilay dragona dia “nandripaka ny ampahatelon’ny kintana eny amin’ny lanitra ka nazerany tamin’ny tany” (Gen.2,4). Ampiasaina imbetsaka ao amin’ny Bokin’ny Apokalypsy io ampahany io. Angamba tokony ho takatsika fa vitsy an'isa io teny io.
Mahazo tantaram-piainana fohy momba ny “zazalahy” an’ilay vehivavy koa isika, izay ilazana an’i Jesosy (Gen.2,5). Ny Apokalypsy eto dia milaza ny tantaran’ny zava-nitranga tamin’i Kristy ary milaza ny tsy fahombiazan’i Satana hanakanana ny drafitr’Andriamanitra.
Nanandrana namono na “nihinana” ny zanak’ilay vehivavy ilay dragona tamin’ny fotoana nahaterahany. Izany dia famantarana ny toe-javatra ara-tantara. Rehefa ren’i Heroda fa teraka tao Betlehema ny Mesia jiosy, dia novonoiny avokoa ny zazakely rehetra tao an-tanàna, izay mety ho nahafaty an’i Jesosy Zazakely (Matio. 2,16). Mazava ho azy fa nandositra nankany Ejipta niaraka tamin’ny ray aman-dreniny i Jesosy. Milaza amintsika ny Apokalypsy fa i Satana tokoa no tao ambadiky ny fikasana hamono an’i Jesosy – “hanana” azy.
Ny mpivaofy teny sasany dia mino fa ny fikasan’i Satana “hihinana” ny zanaky ny vehivavy dia ny fakam-panahy nataony tamin’i Jesosy koa (Matio. 4,1-11), ny fanakonany ny hafatry ny filazantsara (Matio 13,39) ary mandrisika ny fanomboana an’i Kristy (Jaona 13,2). Tamin’ny namonoana an’i Jesosy teo amin’ny hazo fijaliana, dia nety ho nihevitra ny devoly fa nandresy ny Mesia izy. Raha ny marina, ny fahafatesan’i Jesosy mihitsy no namonjy izao tontolo izao sy nanisy tombo-kase ny anjaran’ny devoly2,31; 14,30; 16,11; Kolosiana 2,15; Hebreo 2,14).
Tamin’ny alalan’ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin’ny maty, i Jesosy, ilay zanaky ny vehivavy, dia “nakarina ho any amin’Andriamanitra sy ny seza fiandrianany” (Gen.2,5). Izany hoe natsangana ho amin’ny tsy fahafatesana izy. Nasandratr’Andriamanitra ho amin’ny toeran’ny fahefana maneran-tany i Kristy nomem-boninahitra (Filipianina 2,9-11). Natao “hiahiana ny firenena rehetra amin’ny tehim-by” izy io (12,5). Hamelona ny firenena amin’ny fahefana feno fitiavana izy, nefa tsy misy dikany. Ireo teny ireo - "manapaka ny firenena rehetra" - dia manondro mazava tsara hoe iza no tian'ilay zaza holazaina. Izy no Mesia voahosotr’Andriamanitra, voafidy hanjaka amin’ny tany manontolo ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra (Salamo 2,9; Apok 19,15).